Adeegyada Xirfadlaha ah ee aan bixinno | Popular Jewelry
Halkan ka caan, kaliya maahan iibiyo dahabka. Waxaan ka caawinnaa macaamiisheenna inay doortaan qaybo dahab ah oo qurxoon oo ku habboon qaabkooda iyo miisaaniyaddooda. Haddii aad abaal marinayso naftaada, inaad hadiyad u iibsanayso qof gaar ah, ama aad u dabaaldegeyso dhacdo / dhacdo gaar ah, waad ku qanci doontaa iibsashadaada.
Raadinta wax u gaar ah; shaqsiyeed? Dahablayaasheena farshaxanka ayaa kaa caawin kara inaad naqshadeyso waxyaabaha aad isku qurxisay ee dahabka ah; qaybaha riyadaada ka dhig kuwo la taaban karo. Qaybaha dahabka qurxoon ee sida gaarka ah loo sameeyay ayaa ah kuwa ugu macnaha badan - waxay ka tarjumayaan muujintaada shakhsi ahaaneed. Qaar ka mid ah tusaalooyinka qaybo gooniya loo sameeyay ayaa hoos ku jira:
Dejinta Daabacaadda Loogu Talagalay Maalin Kasta, Guuritaan ama Aroos
Ilkaha Dahabka ah (Grills)
magaca Plates, Magaca Giraaca, Magaca dhegta, Jumlooyinka Magaca, iwm.
Waxyaabaha la Sameeyay oo La Sameeyay
Iyo waxkastoo kale oo aad qiyaasi kartid ... Wax dheeri ah aqriso
Dayactir / Soo Celin
Waan hagaajin karnaa, resize, oo ku soo celi dahabkaagii sidiisii ​​hore. Waxaan sidoo kale awood u leenahay inaan kor u qaadno oo aan u qaabeyno muuqaalka qurxintaada waxyaabaha aad jeceshahay. Tusaalooyinka adeegyada aan bixino waxaa ka mid ah (laakiin aan ku xaddidnayn) kuwa soo socda:
Qalabka korantada / Roobka (Daanta, Qalinka, iyo Dahabka)
Dayactirka guud ee qurxinta
Solar / Welding
Daawashada Bedelka Bateriga
U fiirso dayactirka
Dib-u-warshadaynta & Duugga
Ma jiraan waxyaabo dahab ah oo aan loo baahnayn oo jiifa guriga hareerahooda oo ciid laga gurayo? Waxaan bixinaa xigashooyin dheeman, dahab, iyo platina. Dahabkaaga duugga ah, waxaad heli kartaa lacag ama deyn dukaan, oo aad ugu qoondeyn karto iibsi cusub.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo dheeri ah?
Nala soo xiriir- si farxad leh ayaynu uga jawaabi doonnaa iyaga iyo
xalli wixii walwal ah oo aad ka qabto arrimahayaga
alaabada & adeegyada.
7 maalmood usbuucii, 365 maalmood sanadkii
Magaalada New York waligeed ma seexato, sidaas oo kale annaguna ma =))